China All Solid Wood Chest of Drawers Living Room Bedroom Nightstand # 0103 Ukukhiqiza nefektri | Yamazonhome
Wonke ama-Solid Wood Chest of Drawers Living Room Bedroom Nightstand # 0103
Igama: Isifuba samadilowa
Inombolo imodeli: Amac-0103
Usayizi: 600mm * 400 * 960mm
Isakhiwo se-Tenon ne-tenon + uzimele wokhuni oluqinile
Izinto ezisemqoka yi-oki emhlophe ebisikhule iminyaka eyikhulu. Inokuthungwa okunzima, ukuminyana komoya okuphezulu, amaphethini amahle nenani leqoqo elihle. I-oak emhlophe engeniswe ebangeni le-FAS, njengenye yezicukuthwane okhunini, inokuqina okuhle nokuzinza, futhi ihlukile Ukuthungwa okwenziwe ngokhuni okumise okwezintaba kudlulisa ukuqina nobumnene bemvelo, futhi umzimba wonke wekhabethe uzinzile futhi awunakuzanyazanyiswa umuzwa futhi uhlala njalo.
Ukwelashwa kokuqoqa amakhona
Ubuciko obuhle bokuklama kwekhoneni
Imiphetho yekhabinethi iyindilinga futhi iyindilinga ukuvimbela ngempumelelo ukushayisana. Izakhiwo zangaphakathi nezangaphandle zifuthwa nge-varnish, anti-corrosion nokumelana namanzi, ukupholisha okungama-360-degree ngaphandle kwamakhona afile, futhi ukubukeka kuyefana. Idizayini elula ivame ukukwazi ukumelana nokupholishwa kwesikhathi, ngemigqa ehlanzekile, enombala ocacile nelula, isitayela esihlukile, esigcwele ubuncane beNordic.
Isibambo sethusi esezingeni eliphakeme
Odwebi bokhuni abaqinile abanezibambo zethusi balula futhi banethezeka. Ngemuva kwezikhathi ezingama-50 zokucwebezelisa ngokucophelela, indawo ebushelelezi ngaphandle kwezinsimbi, umphathi wokuhlola usefakazele kaninginingi izikhathi eziyi-15, kwakheka ukugqama okunjalo okucacile. Imiphetho yedrowa igcinwe ngamalunga wokunweba, Nciphisa ngokunembile igebe, uvikele ngempumelelo ukhuni ekuqhekekeni nasekukhubazekeni. Isibambo sethusi esiqoshwe siqinile futhi akulula ukugqwala.
Amadilowa amaningi ngobukhulu obuhlukile
Idizayini enamakhabethe amaningi, umsebenzi wokugcina onamandla, ngayo, ikhaya liba lihle futhi lihleleke ngokuphazima kweso. Ibhodi elikhulu liqondile futhi impahla igcwele, futhi alikho ibhodi elihlangene lomunwe, elingagcina izinto nezincwadi, futhi likwazi ukusebenza ngokuqinile. Ingasetshenziswa njengekhabethe lokudonsa eliseceleni kombhede, amakhabethe we-TV asekamelweni, amakhabethe eseceleni egumbi le-TV, anama-collocation ahlukahlukene nezigidi zokusetshenziswa. Isikhala sedrowa yangasese sikunikeza umuzwa ophelele wokuvikeleka.
Isitimela somhlahlandlela wokhuni oluqinile sinokuqina okuqinile kokugqoka
Izinsimbi eziqinile zamasilayidi wokhuni, ikhabethe le-slot sliding, umdwebo obushelelezi, ukukhanya nokuthula, akulula ukukhululeka, okuqinile nokuqina kokugqoka. Isikhala sekhadi sinqunywe ngokuphelele, umdwebo awunamathele, wonga isikhathi namandla, futhi kulula ukuthatha.
Izinto eziwusizo zemilenze eqinile yokhuni lwekhabethe
Imilenze eqinile yokhuni lwekhabethe izinzile futhi ayisheleli, inamandla futhi ihlala isikhathi eside. Landela umqondo wokuklanywa wegumbi lonke bese udizayina isethi yezixazululo ezifanayo zekhaya lakho elihle ngenhloso yemfashini nokuguquguquka. Ngezansi kunokwakheka okungasheleli futhi okungavumi ukugqoka, okwenza kube lula ukuphusha nokudonsa. Ngeke kuthinte abanye abanye, kuvikele phansi futhi kwandise impilo yokusebenza kwekhabhinethi.
Langaphambilini Umdwebo we-yoga wokudlalisa i-gym mat inflatable air track 0384
Olandelayo: I-Oak Wardrobe Silent Damping Slide Rail Sliding Door Wardrobe Igumbi lokulala Ifenisha # 0108
I-Bohn Hut Shaped Wooden Pet Dog House
I-Unitarp Yantanta Yabantu Abadala Abathandekayo Swi ...
Isitayela Sesimanjemanje Esilula Esimhlophe Esihlanganisiwe ...
Izinkathi ezine zonyaka ezi-Wicker ezifudumele eziSebenzayo ezifuywayo Yiba ...